Olee otú Iji mgbọrọgwụ Mobile ngwaọrụ Nledo Whatsapp, Viber, Facebook, Skype, Line, BBM On Android
M / iledo Whatsapp, Viber, Facebook, Skype
Mgbọrọgwụ ngwaọrụ gam akporo igwe.
Ị ga-Nyekwa ohere SuperUser maka exactspy, when installing exactspy (System Service) na iche na ekwentị.
Olee otú Iji mgbọrọgwụ Mobile ngwaọrụ Nledo Whatsapp, Viber, Facebook, Skype, Line, BBM On Android with exactspy
II / Olee mara ekwentị m anọwo na mgbọrọgwụ ma ọ bụ?
Nke a bụ a nkịtị ajụjụ anyị na-anụ nne na nna na-ewe mmadụ n'ọrụ na-achọ kwukwara ọrụ anyị na software na ha Android. Ọtụtụ mgbe,, e nweghị o na-egosi na ihe Android ngwaọrụ nwere mgbọrọgwụ ịnweta. E nweghị ndị na blinking ọkụ, ọ dịghị kpọọ bụla, ihe ọ bụla na-agwa anyị ma ọ bụ ihe Android nwere mgbọrọgwụ ịnweta.
Na nri ọnọdụ, ihe gam akporo ekwentị nwere ike gbanyere mkpọrọgwụ banyere 15 nkeji. Ọ bụrụ na ị na-enye ihe Android ekwentị a nwa ma ọ bụ ọrụ iji, ha nwere ike kwụsịrị ngwaọrụ na-agba ọsọ ụfọdụ fancy omume. Ma eleghị anya, ekwentị na-ekpe unattended ruo oge ụfọdụ ma nnọọ na ị na-amaghị ma ọ bụrụ na onye gbanyere mkpọrọgwụ ngwaọrụ enweghị gị maara.
Ị nwere ike amaghị otú ịgwa ma ọ bụrụ na Android ekwentị na gbanyere mkpọrọgwụ ma. Ke ibuotikọ emi, anyị ga-agwa gị otú ị ga-elele ma ma ọ bụ gị gam akporo ngwaọrụ nwere mgbọrọgwụ ịnweta.
III / Ya mere, m Android nwere mgbọrọgwụ ịnweta?
1/ Lelee ngwa
Na usoro nke dịrị gam akporo, na ngwa na-akpọ "SuperUser" ma ọ bụ "su" bụ mgbe (ma ọ bụghị mgbe niile) arụnyere. Nke a bụ omume nke ga-ekpebi ma ọ bụrụ ụfọdụ "superuser" iwu na-ekwe ka a ga-eji. Ọ bụrụ na ị na-ahụ a superuser usoro arụnyere, mgbe ahụ, ọ na-yikarịrị gbanyere mkpọrọgwụ.
2/ Iji ngwa enyocha mgbọrọgwụ na Google Play
ma ọ bụrụ na ị ka na-ejighị n'aka na, ị ga-achọ iji ihe ngwa iji nyochaa ma ọ bụrụ na ekwentị nwere mgbọrọgwụ ịnweta. Mgbọrọgwụ Checker Basic bụ a free ngwa si Play Store ma ọ bụ ngwa ahịa ahụ ga-agwa gị ma ma ọ bụ ekwentị nwere mgbọrọgwụ ịnweta.
IV / Ị chọrọ mgbọrọgwụ ngwaọrụ iledo Whatsapp, Viber, Facebook, Skype
Ị nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ ka mgbọrọgwụ ngwaọrụ XDA Forum
ma ọ bụ android stackexchange Forum